Video | ၂၀၁၄-ခုနှဈ မတျလ ၁၆ ရကျနကေ့ စဈတှမွေို့ ဝင်ျကဘာကှငျးတှငျ ဆန်ဒပွလူထုပရိတျသတျအား ဦးကြျောဇောဦး ပွောကွားခဲ့သော မိနျ့ခှနျး – Kyaw Zaw Oo's Blog
March 17, 2014 March 4, 2019 kyaw zaw oo
Video | ၂၀၁၄-ခုနှဈ မတျလ ၁၆ ရကျနကေ့ စဈတှမွေို့ ဝင်ျကဘာကှငျးတှငျ ဆန်ဒပွလူထုပရိတျသတျအား ဦးကြျောဇောဦး ပွောကွားခဲ့သော မိနျ့ခှနျး
ကျွန်တော်နာမည် ကျော်ဇောဦးပါ။ ရခိုင်လူမှုကွန်ယက်မှာ ပါဝင်လှုရှားနိန်ရေ လူတစ်ယောက် ဖြိုက်ပါရေ။ လိုရင်းတိုရှင်းနဲ့ အချိန်အတိုဆုံးဖြိုက်အောင် ပြောလားပါမေ။
ဒေဆန္ဒပြပွဲလုပ်ရစွာနဲ့ပတ်သက်လို့ အသေးစိတ်နဲ့ယေဘုယျအကြောင်းအရာတိကိုတော့ခါ ရှိကလူတိပြောလားဗျာဖြစ်လို့ အကျယ်တဝင့် မပြောပါဗျာလ်။ ကော်မတီက ကျွန်တော်ကို တာ ဝန်ပီးထားရေအတိုင်း ဒေဆန္ဒပြပွဲနန့် အမျိုးသားနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်း အဆက်အစပ်ကို တစိချေလောက်ပြောလားဖို့ဖြိုက်ပါရေ။
ပြောဖို့စကားတိထဲက ပထမဆုံးစကားကတော့ခါ ဒေကနိန့်ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲက မြို့နယ်ပေါင်း (၁၃)မြို့နယ်က ရခိုင်သူ ရခိုင်သားတိနန့် တစ်ပြိုင်တည်း လမ်းထက်ကိုထွက်ပြီး ဆန္ဒပြကတ် တေ အခုသန်းခေါင်စာရင်းအရေးမှာ ထွက်ပြီးကေ ဆန္ဒပြကတ်တေ စစ်တွေမြို့သူမြို့သားတိ စွာ အခုပိုင်သမိုင်းတကွေ့မှာ သမိုင်းတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ကတ်တေ တိုက်ပွဲဝင်ရဲဘော်တိ ဖြိုက်တေဆိုရေအကြောင်းကို အလေးအနက်အသိအမှတ်ပြုကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြား လိုပါရေ။
အေလူတိအခုထွက်လာပြီး ဆန္ဒပြကတ်တေ။ ဇာဖြစ်လို့လဲ။ ရူးနိန်လို့လား။ မဟုတ်ပါ။ သမိုင်း တကွေ့မှာ မပြောကေမဖြစ် ဝင်လို့မတားဆီးကေမဖြိုက်တေစကားတစ်ခွန်းကို ဝင်ရောက်ဟန့် တားပြောဆိုရေအနိန်နဲ့ ဆန္ဒထွက်ပြကတ်ရစွာဖြိုက်ပါရေ။ ဇာစကားကို ပြောစွာလေးဆိုကေ သန်းခေါင်းစာရင်းကောက်တေအခါ လူမျိုးစာတိုင်မှာ ကုတ်နံပါတ် (914) ကိုဖြည့်ရေအခါ မမှန်မကန် လူမျိုးလိမ်နာမည် ရိုဟင်ဂျာဆိုစွာကို မထည့်ကေ့လို့ တစုတစည်းတည်း တခဲနက် ဝင်ရောက်ဟန့်တား ပြောနိန်ကတ်စွာဖြိုက်ပါရေ။
ပြီးခရေ နှစ်ပတ်ကျော်လောက်က စစ်တွေမြို့မှာ AZG ခေါ် MSF-Holland ရခိုင်ပြည်က ထွက်လားဖို့ဆန္ဒပြကတ်တေအခါ AZG ကို အိမ်ငှါးထားရေ အိမ်ရှင်တိထဲကတချို့ကပြောစွာ စကားတချို့ကို တဆင့်စကားတဆင့်နန့် ကျွန်တော်ပြန်ကြားရစွာရှိပါရေ။ ယင်းသူရို့က ဇာပြောလေးဆိုကေ “ အဝေး….စုပ်စရာ မရှိရေလူတိ ဆန္ဒပြနိန်ကတ်စွာရာ” လို့ ဆိုရေလို့ ပြောသံကြားပါရေ။
ယင်းသစ္စာဖောက်တိက ဇာပြောပြော၊ သေချာစွာကတော့ခါ အေစစ်တွေမြို့သူမြို့သား ရခိုင်သူ
ရခိုင်သားတိစွာ စုပ်စရာမရှိလို့ ဆန္ဒပြနိန်စွာ မဟုတ်၊ မိမိရို့လူမျိုးမပျောက်ကွယ်ရအောင် ရှိသမျှနည်းလမ်းနန့် ကာကွယ်တားဆီးနိန်ကတ်စွာရာ ဖြိုက်ပါရေ။ ကိုယ်ဖြိုက်စီချင်စွာကို ဖြိုက်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်၊ ကိုယ်ရို့က မဖြိုက်စီချင်စွာကို မဖြိုက်အောင်တားဆီးဖို့အတွက် အင်အားလိုပါရေ။အင်အားဆိုရာမှာ အမျိုးမျိုးဟိပါရေ။ ကျည်ဆံ၊ လက်နက်တိပိုင် အင်းအားလိုပါရေ။ ကျည်ဆံတိ၊ လက်နက်တိပိုင် အင်အားမရှိကေ နိုင်ငံရေးအာဏာဆိုရေ အင်အားလိုပါရေ။ ယကေ… ကျွန်တော်ရို့မှာ ကျည်ဆံမရှိ၊ လက်နက်မရှိ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရ ဆိုစွာလေး အားကိုးမရ၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရဆိုစွာလေး ကျွန်တော်ရို့ကို အကာအကွယ်မပီးလို့ အခုပိုင် လူအင်အားနန့် အသံအင်အားနန့် တားဆီးနိန်ရစွာ ဖြိုက်ပါရေ။
အခုအခါ ၂၀၁၀ တည်းက အရပ်သားဝတ်စုံနန့် သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရ တက်လာပြီး တည်းကပင် ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာ ဆန္ဒပြပွဲတိ အများကြီး……၊ ဗမာပြည်ထဲမှာလည်း ဆန္ဒပြပွဲတိ အများကြီးဖြိုက်ခကတ်တေ။ ဗမာပြည်မထဲမှာဖြိုက်ခရေ ဆန္ဒပြပွဲတိဆိုကေ ရခိုင်ပြည်ထဲမှာ ဖြိုက်ခရေ ဆန္ဒပြပွဲတိထက် အများကြီးပြင်းထန်ပါရေ။ အတိုက်အခံ ဆန္ဒပြရေလူတိက အားနဲ့ ဒါးနဲ့ အတိုက်အခံလုပ် ဆန္ဒပြရေ။ ဗမာအစိုးရကလည်း အင်အားသုံးဖြိုခွင်းရေ။ လက်ပံတောင်း အရေးအခင်းမှာဆိုကေ ဖုန်းကြီးတိကို မီးလောင်ဗုံးနန့်ပစ်တေ။ နံပါတ်တုတ်တိနန့် သတ်လို့နှိမ်နှင်းရေ။
ယေကေလေ့ ကချင်ပြည်နယ်မှာ ဆန္ဒပြပွဲတိတစ်ခါလေ့မဖြိုက်ကာ။ အေလောက် ပဋိပက္ခ ပြင်းထန်ရေ ကချင်ပြည်နယ်မှာ ဆန္ဒပြပွဲတိ မရှိပါ။ ဇာဖြိုက်လို့လဲ။ ဇာဖြိုက်လို့လဲဆိုကေ မိမိရို့နစ်နာချက်ကို ဖြေရှင်းရေနိန်ရာမှာ ဆန္ဒပြခြင်းနည်းလမ်းကို ကချင်တိမှာ အဓိကထား သုံးစရာ မလိုလို့ဖြိုက်ပါရေ။ ဗမာအတိုက်အခံတိမှာ သူပုန်တပ်မရှိ၊ ရခိုင်လူမျိုးတိမှာလေး ရခိုင်ပြည်ထဲမှာ သူပုန်တပ်မရှိ။ ကိုယ့်နစ်နာချက်ကို ပြောရေအခါ၊ အမျိုးသား အန္တရာယ်တိကို ကာကွယ်တားဆီးရေနိန်ရာမှာ၊ ကြားကဖြေရှင်းရေး ကိရိယာအနိန်နန့် တပ်မရှိ။ လက် နက်ကိုင်တပ်မရှိကေ ရှိစွာလက်နက်သုံးရရေ။ လမ်းကိုထွက်ပြီးကေ လူအင်အားနန့် အသံကျယ်အောင်အော်ရပါရေ။ အေး… ပြောလိုက်မေ။ ဆန္ဒပြချင်လား……။ ဆန္ဒမပြချင်ကေ တပ်ရှိအောင်လုပ်။ ဆန္ဒလေးမပြချင် … တပ်လေး မထောင်ချင်ကေ… ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရကို ကိုယ့်အစိုးရဖြိုက်အောင်လုပ်ပါ။ အာဏာရ အောင်လုပ်ပါ။
နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရာ ဘာသာရပ်မှာ စကားတစ်ခွန်းရှိပါရေ။ “စကားကို ချိုချိုသာသာပြောပါ။
ယကေလေ့ တုတ်ကြီးကြီးတစ်ချောင်းတော့ ဆောင်ထားပါ။” စကားကိုချိုချိုသာသာပြောပါ။ တုတ်အကြီးတစ်ချောင်းကိုင်ထားပါလတ်။ ယေကေ ပြောလိုက်ပါမေ။ စကားကို ထိရောက်မှုရှိအောင် ရက်ပြတ် ရက်ပြတ်အော်နိန်ရရေ ရခိုင်ပြည်သူပြည်သားတိ…၊ စကားကို အော်မပြောချင်လား၊ စကားကို တတိုးချေ၊ ချချိုသသာနန့် ထိထိရောက်ရောက်ဖြိုက်အောင် ပြောချင်ရေဆိုကေ တုတ်ကြီးကြီးတစ်ချောင်းတော့ ဆောင်ထားပါ။ တည့်တည့်ပြောရဖို့ ဆိုကေ… တပ်ရှိရဖို့။ ရှိရေတပ်လေ့သော ရခိုင်ပြည်ထဲမှာ သနတ်ပေါက်ရပါဖို့။ ကျွန်တော် ကတော့ခါ တပ်ထောင်ရေလိုင်းကလူမဟုတ်။ တရားဝင်မြေပေါ်က အာဏာ တည်ဆောက် တေလိုင်းထဲက လူတစ်ယောက်ဖြိုက်ပါရေ။ သုံးသပ်ပြစွာပါ။ ကျွန်တော့်ကို ဖမ်းချင်ကေလေ့ နှစ်ပါတီပေါင်းပြီး ခါမှ နောက်တစ်ခေါက်ဖမ်းလို့ထောင်ချပါ။
သန်းခေါင်စာရင်းဥပဒေမှာ ပုဒ်မ-၁၂ ရို့ ပုဒ်မ-၁၆ ရို့မှာ ပြောထားပါရေ။ အချက်အလက်ကို မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြည့်သွင်းရဖို့ဆိုပြီးကေ ပြဌာန်းထားပါရေ။ ပုဒ်မ-၁၉ မှာတော့ ဇာပိုင်ဆိုလေး ဆိုကေယင်းပိုင်မှန်မှန်ကန်ကန် ရီးဖြည့်မသွင်းကေ ထောင်ဒဏ် တစ်လ၊ ငွေဒဏ်ငါးသောင်း ချမှတ်နိုင်ရေလို့ဆိုပါရေ။ ယင်းပိုင် ဥပဒေမှာ ပြဌာန်းထားရေ အတိုင်းနာမည်လိမ် လူမျိုးလိမ်ကို မဖြည့်သွင်းဖို့နန့် ရိုဟင်ဂျာဆိုရေလူမျိုးလိမ်နာမည်ကို ဖြည့်ကေအရေးယူဖို့ထုတ်ပြန် ကြေငြာ ကေ ရပါရေ။ ယင်းပိုင်မကြေငြာဘဲနန့် လူ့အခွင့်အရေးအရ ခိုးဝင်ဘင်္ဂလီဖြိုက်ဖြိုက် အသူ ဖြိုက်ဖြိုက် ကြိုက်တေ လူမျိုးနာမည်ကို ရွီးနိုင်ရေလို့ခွင့်ပြုထားစွာကိုကြည့်ကေ… ဗမာအစိုးရ၊ ဗဟိုအစိုးရ၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရဆိုစွာ ကိုယ့်အစိုးရမဟုတ်လို့ အားကိုးမရဆိုစွာ ပေါ်လွင် နိန်ပါရေ။ အခု ရခိုင်တိနန့် ထိပ်တိုက်တိုးခိုင်းပြီးကေ ရခိုင်တိကို လူမိုက်လုပ်ခိုင်းပြီးကေ အသုံးချရေဆိုစွာမျိုး သုံးသပ်လို့ရနိုင်ပါရေ အခြေအနေတချို့ကို အခုရှုမြင်သုံးသပ်ရပါရေ။
ပြီခရေ AZG နှင်ထုတ်ဆန္ဒပြပွဲမှာ လွန်ခရေ ၂-ပတ်လေက်က ဒေဝင်္ကဘာကွင်းမှာ ကျွန်တော်ပြောခရေ။ အခုရခိုင်ပြည်ကို ရခို်င်ပြည်နယ်လို့ခေါ်ရေအကြောင်း၊ ယင်းရခိုင် ပြည်နယ်ဆိုစွာမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရဆိုစွာနန့် ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုစွာရှိရေ။ ယင်းရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာ တစ်ခုလေ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ တစ်ခုလေ့မရှိလို့ ပြောခပါရေ။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ အရေးကြီးဆုံးပြဿနာသုံးရပ်ဖြစ်တေ-(၁) ဘင်္ဂလီကုလားပြဿနာ (၂) သယံဇာတပြဿနာ (၃) စစ်တပ်က မြေသိမ်းထားစွာတိ ပြန်ရရှိရေးပြဿနာတိကို တစ်ခုလေးမလုပ်ပီးနိုင်ရေလုပ်ပိုင်ခွင့်မဲ့အာဏာမဲ့ ပြည်နယ်အစိုးရနန့် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဖြိုက်တေဆိုရေ အကြောင်းကို ပြောခပါရေ။ အခုထပ်ပြောလိုက်ပါမေ။ အခုရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုစွာအယင်လွန်ခရေ နှစ်ပေါင်း သုံးဆယ် လောက်က ရခိုင်ပြည်နယ်ကောင်စီလောက်တောင် အသုံးမကျ၊ အာဏာမရှိလို့ ကျွန်တော် ထပ်တိုးလို့ အခုပြောပါရေ။ နာမေကရာ အကြီးမသန်၊ နာမေကရာ အစိုးရလတ်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့် တစ်ခုလေ့မရှိ၊ ကောင်စီလောက်တောင် အသုံးမကျ၊ အားလုံးအခွံ၊ ပြည်နယ်ဆိုစွာလေးအခွံ၊ ပြည်နယ်အစိုးရဆိုစွာလေးအခွံ၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုစွာလေးအခွံ၊ အားလုံးအခွံ။
ယကေလေ့သော တချက်ပြောရဖို့ဆိုကေ ယင်းအခွံတိလေး အရေးကြီးပါရေ။ ယင်းအခွံတိကို ဗမာအစိုးရ ပြန်ယူလို့မရအောင် ကျွန်တော်ရို့ သိမ်းထားပြီးကေ ယင်းအခွံတိထဲမှာ အသားကို တဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည့်ယူလားလို့ရပါဖို့။ ဇာအသားတိကို ဖြည့်ယူလားရဖို့ဆိုကေ – – –
© ရခိုင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်ကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတက မခန့်ဘဲ ပြည်နယ်လွှတ်တော်က တိုက်ရိုက်ခန့် နိုင်အောင်လုပ်ရဖို့-
© ပြည်နယ်လွှတ်တော်လုံးဝ အပိုင်စီးထားနိုင်သော လွှတ်တော်အမတ် အရေအတွက် ရအောင်လုပ်ရပါဖို့
© မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတိကိ်ု ဗဟိုကခန့်စွာ မဟုတ်ဘဲ မြို့တော်ဝန်အဖြိုက်၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတိက ရွေးကောက်တင်မြှောက်နိုင်ရေ စနစ်ဖြိုက် လာအောင်ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်ရပါဖို့ –
© ပြည်နယ်လွှတ်တော်နန့် ပြည်နယ်အစိုးရ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့် ဇယားတိကို တိုးချဲ့ရအောင်လုပ်ရပါဖို့ –
© ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲက ရွှေဂတ်အပါအဝင် သဘာဝ သယံဇာတတိ၏ ဝင်ငွေအများစုကို ရခိုင်ပြည်နယ်သားတိခံစာခွင့်ရအောင် ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြင်ရပါဖို့။ – –
-ယင်းပိုင်အသားတိအနှစ်တိကို ဒေပိုင်အခွံသက်သက်ဖြစ်နိန်ိစွာ နိန်ရာတိထဲမှာ ဖြည့်လားနိုင်ကေ သေနတ်မဖောက်ဘဲနန့် နည်းနည်းချင်း နည်းနည်းချင်း ကိုယ့်ရပိုင်ခွင့်တိကို ရနိုင်အောင် ကြိုးစားလားဖို့ဆိုစွာလေး မဟာဗျူဟာနည်းလမ်းတစ်ရပ် ဖြိုက်ပါရေ။
ကျွန်တော်ရို့က ဒေပိုင်သေနတ်မဖောက်ဘဲ လုပ်နိုင်ဖို့နည်းလမ်းတိကို အိမ်မက်မက်နိန်ရေ အချိန်မှာ ကုလားတိကတော့ခါ နေရာတိုင်းအချိန်တိုင်းမှာ သေနတ်မဖောက်ဘဲ ရခိုင်ပြည်ကို သိမ်းရေနည်းလမ်းတိနန့် ရခိုင်ပြည်ကိုတစ်စချင်းတစ်စချင်းသိမ်းယူနိန်ပါရေ၊ ကုလားတိရေ လူမွီးယင်း၊ မွီးရေလူကို နိုင်ငံသားနန့်အခွင့်အရီးရအောင် တစ်စချင်းတစ်စချင်းခိုးကြောင် ခိုးဝှက်လုပ်နိန်ကတ်ပါရေ။
ဒေ ရခိုင်ပြည်မှာ သောင်းကျန်းရေ ဒေ ကုလားတိပြဿနာကို မှားယွင်းစွာ ပုံဖော်ကတ်နေအတွက်နန့် ကျွန်တော်ရို့ရခိုင်တိဖက်က အများကြီးနစ်နာစွာတိဟိပါရေ။ ရခိုင်ပြည်ဘက်မှာ ဖြိုက်တေ ဒေပဋိပက္ခတိစွာ ဗမာပြည်မဘက်မှာ ဖြိုက်တေ မိတ္ထိလာ ဥက္ကံ လားရှိုးရို့ဘက်မှာ ဖြိုက်တေ ပဋိပက္ခတိနန့် သဘောသဘာဝချင်း မတူပါ။ ဗမာပြည်ဖက်မှာ ဖြိုက်စွာတိစွာ ဘာသာရေး ပဋိပက္ခကြောင့် ဖြိုက်ရစွာပါ။ ဘာသာမတူရေ အုပ်စုကွဲတိ ပဋိပက္ခဖြိုက်ကတ်စွာပါ။ ယင်းအတွက် နန့် ယင်းပဋိပက္ခတိကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက် လူ့အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခု ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယဉ်တွဲနေထိုင်ရေးကို ယင်းဘက်မှာ ပြောချင်ကေပြောပါ။ ဒေဘက်မှာ လာမပြောပါကေ့။
ဇာဖြိုက်လို့လေးဆိုကေ ဒေရခိုင်ပြည်ဘက်မှာ ဖြိုက်တေ ပဋိပက္ခတိစွာ ဘာသာရေးပဋိပက္ခမဟုတ်။ ဒေကပြဿနာစွာ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ပြဿနာ၊ နပ်စပ်လုံခြုံရေး ကျိုးပေါက်လားရေပြဿနာ ဖြိုက်ပါရေ။ ယင်းပိုင်သဘောသဘာဝရှိရေ ပြဿနာဖြိုက်တေ ဆိုစွာကို နိုင်ငံတကာမှာ မီဒီယာမှာ ထင်ရှားသိသာနိုင်အောင် ကျွန်တော်ရို့ ဘက်က မပြောနိုင်ခ။ နိုင်ငံတကာ မီဒီယာမှာ ကျွန်တော်ရို့ ရှုံးခပါရေ။
ဒေပိုင် ရခိုင်ပြည်မှာ ခိုးဝင်ကျူးကျော်ဘင်္ဂါလီတိ ဖောင်းပွ သောင်းကျန်းစွာ ပြဿနာကို ဘာသာရေး ပဋိပက္ခပိုင် ပုံဖော်ပြီးကေ နှစ်ဖက်ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း နိန်ကတ်ပါ ချစ်ချစ်ခင်ခင်န်ိန်ကတ်ပါ လို့ လာလာ ပြောနိန်ကတ်တေ။
ယင်းပိုင် ဖြေရှင်းလို့မရပါ။ ဖြေရှင်းရဖို့နည်းလမ်းကတော့ခါ ၁၉၈၂-နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့် ဥပဒေ နန့် စိစစ်ပြီးကေ ဥပဒေအတိုင်းအရေးယူ ဆောင်ရွက်လားရဖို့ ဖြိုက်ပါရေ။
ယင်းချင့်ကို နိန့်ရွှိ့ ရက်ရွိ့ ရွှိ့ပြီးကေ၊ ထိုလိုလို ဒေလိုလို လုပ်ပြီးကေ၊ အရေးယူရဖို့စွာကို အရေးမယူဘဲနဲ့ အခုကျမှ . . . သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ဖို့စွာရာဝေး . . . နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့် တိုင်းရင်းသားဖြစ်ခွင့် နန့်မဆိုင်ဝေး လို့ ပြောနိန်စွာရေ နှစ်ပေါက်တစ်ပေါက်ရိုက်ဖို့ လုပ်နိန်စွာလို့ရာ ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါရေ။
ဒေကုလားပြဿနာစွာ နိုင်ငံရေးပြဿနာဖြိုက်ပါရေ။ ဘာသာရေး ပဋိပက္ခ မဟုတ်။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ ကိုယ်တိုင်က နိုင်ငံရေးပြဿနာမှန်း သိပါယင့်နန့်၊ မတူသော အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုကြားက ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေးအသွင်ဆောင်သော ပဋိပက္ခ ဆိုပြီးကေ အလွဲလွဲအမှားမှား ခေါင်းစဉ်တတ်ထားစွာကိုလေ့ ရခိုင်လူမျိုးတိက လက်ခံနိုင်ဖို့ မဟုတ်ပါ။ ဒေပြဿနာရေ နိုင်ငံရေးပြဿနာ၊ လူဦးရေဖိအားနန့် ဘာသာရေးအကြောင်းပြ၊ လူ့အခွင့်အရေးမျက်နှာဖုံးစွပ်ထားပါရေ ကျူးကျော်မှု ပြဿနာရာဖြစ်ပါရေ။
တာဝန်ရှိရေ အစိုးရတိရေ ပြတ်ပြတ်သားသားကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ လိုပါရေ၊ ရခိုင်လူမျိုးတိ စိုးရိမ်
သောကကို နားလည်လက်ခံရေ ဖြေရှင်းနည်းကရာ ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓါတ်ကို ကိုယ်စားပြုရေ လို့ ရခိုင်လူမျိုးတိက အသိအမှတ်ပြုဖို့ ဖြစ်ပါရေ။
အသံကောင်းဟစ်နိန်ရုံ ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါလောက်နန့် ပြည်ထောင်စုတည် ဆောက်လို့မရပါ ပြည်ထောင်စုလုံခြုံရေးကိုလည်း အာမခံနိုင်ဖို့မဟုတ်ပါ။
သန်းခေါင်စာရင်းမှာ ဘင်္ဂလီနာမည်လိမ် (ရိုဟင်ဂျာ)ကို ကုလသမဂဆန္ဒ လူ့အခွင့်အရေး ဦးစားပီးအမြင်နန့် ရွီးသားခွင့်ပြုစွာ အလွန်အန္တရာယ်များရေ ပြည်ထောင်စုအမျိုးသားလုံခြုံရေး ပြဿနာဖြိုက်ပါရေ။
ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစာပီး နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှတ်နှံမှု လောဘ၊ နိုင်ငံတကာနန့် ပြေလည်ရေး တဖက်သပ် အမြင်ရေ ပြည်ထောင်စုအမျိုးသားလုံခြုံရေးကို မျက်ကွယ်ပြုရာရောက်ပါလိမ့်မေ။
သန်းခေါင်းစာရင်းမှာဘင်္ဂလီနာမည်လိမ် (ရိုဟင်ဂျာ) ရေးသွင်းခွင့်ပြုခြင်းရေ နောက်လာဖို့ ကာလတိ (နှစ်ပေါင်း ၁၀၊ ၂၀)မှာ ကုလသမဂနန့် နိုင်ငံတကာပါဝင် စွက်ဖက်မှုကိုပိုလို့ ပိုလို့ လမ်းဖွင့်ပီးရာကျပါလိမ့်မေ။
ရခိုင်လူမျိုးတိက ဒေကိစ္စ (ရိုဟင်ဂျာ နာမည်ရွီးသွင်းခွင့်) ကို ပြတ်ပြတ်သားသား ဆန့်ကျင်ကန့် ကွက်ပါရေ။ အယင်ဆုံး ရုတ်သိမ်းပယ်ဖျက်ပီးဖို့ တောင်းဆိုပါရေ။
နောက်ဆုံးအပိတ်အနိန်နန့် ပြောချင်စွာကတော့ခါ . . .
ပြည်ထောင်စုအစိုးရရေ တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားပြုအစိုးရ ဖြိုက်ပါဇီ။
ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရရေ ရခိုင်မျိုးနွယ်ကိုယ်စားပြုအစိုးရ ဖြိုက်ပါဇီ။
ရခိုင်ပြည်နယ်လုံခြုံရေးရေ ပြည်ထောင်စုလုံခြုံရေးဖြိုက်တေ လို့ မှတ်ယူလုပ်ဆောင်ကတ်ပါလို့လည်း သက်ဆိုင်သူတိကို ကျွန်တော် ဒေနိန်ရာက ပြောခချင်ပါရေ။
ကြှနျတျောနာမညျ ကြျောဇောဦးပါ။ ရခိုငျလူမှုကှနျယကျမှာ ပါဝငျလှုရှားနိနျရေ လူတဈယောကျ ဖွိုကျပါရေ။ လိုရငျးတိုရှငျးနဲ့ အခြိနျအတိုဆုံးဖွိုကျအောငျ ပွောလားပါမေ။
ဒဆေန်ဒပွပှဲလုပျရစှာနဲ့ပတျသကျလို့ အသေးစိတျနဲ့ယဘေုယအြကွောငျးအရာတိကိုတော့ခါ ရှိကလူတိပွောလားဗြာဖွဈလို့ အကယျြတဝငျ့ မပွောပါဗြာလျ။ ကျောမတီက ကြှနျတျောကို တာ ဝနျပီးထားရအေတိုငျး ဒဆေန်ဒပွပှဲနနျ့ အမြိုးသားနိုငျငံရေးအခငျးအကငျြး အဆကျအစပျကို တစိခလြေောကျပွောလားဖို့ဖွိုကျပါရေ။
ပွောဖို့စကားတိထဲက ပထမဆုံးစကားကတော့ခါ ဒကေနိနျ့ရချိုငျပွညျနယျထဲက မွို့နယျပေါငျး (၁၃)မွို့နယျက ရခိုငျသူ ရခိုငျသားတိနနျ့ တဈပွိုငျတညျး လမျးထကျကိုထှကျပွီး ဆန်ဒပွကတျ တေ အခုသနျးခေါငျစာရငျးအရေးမှာ ထှကျပွီးကေ ဆန်ဒပွကတျတေ စဈတှမွေို့သူမွို့သားတိ စှာ အခုပိုငျသမိုငျးတကှမှေ့ာ သမိုငျးတာဝနျကို ထမျးဆောငျကတျတေ တိုကျပှဲဝငျရဲဘျောတိ ဖွိုကျတဆေိုရအေကွောငျးကို အလေးအနကျအသိအမှတျပွုကြေးဇူးတငျရှိကွောငျးပွောကွား လိုပါရေ။
အလေူတိအခုထှကျလာပွီး ဆန်ဒပွကတျတေ။ ဇာဖွဈလို့လဲ။ ရူးနိနျလို့လား။ မဟုတျပါ။ သမိုငျး တကှမှေ့ာ မပွောကမေဖွဈ ဝငျလို့မတားဆီးကမေဖွိုကျတစေကားတဈခှနျးကို ဝငျရောကျဟနျ့ တားပွောဆိုရအေနိနျနဲ့ ဆန်ဒထှကျပွကတျရစှာဖွိုကျပါရေ။ ဇာစကားကို ပွောစှာလေးဆိုကေ သနျးခေါငျးစာရငျးကောကျတအေခါ လူမြိုးစာတိုငျမှာ ကုတျနံပါတျ (914) ကိုဖွညျ့ရအေခါ မမှနျမကနျ လူမြိုးလိမျနာမညျ ရိုဟငျဂြာဆိုစှာကို မထညျ့ကလေို့ တစုတစညျးတညျး တခဲနကျ ဝငျရောကျဟနျ့တား ပွောနိနျကတျစှာဖွိုကျပါရေ။
ပွီးခရေ နှဈပတျကြျောလောကျက စဈတှမွေို့မှာ AZG ချေါ MSF-Holland ရခိုငျပွညျက ထှကျလားဖို့ဆန်ဒပွကတျတအေခါ AZG ကို အိမျငှါးထားရေ အိမျရှငျတိထဲကတခြို့ကပွောစှာ စကားတခြို့ကို တဆငျ့စကားတဆငျ့နနျ့ ကြှနျတျောပွနျကွားရစှာရှိပါရေ။ ယငျးသူရို့က ဇာပွောလေးဆိုကေ “ အဝေး….စုပျစရာ မရှိရလေူတိ ဆန်ဒပွနိနျကတျစှာရာ” လို့ ဆိုရလေို့ ပွောသံကွားပါရေ။
ယငျးသစ်စာဖောကျတိက ဇာပွောပွော၊ သခြောစှာကတော့ခါ အစေဈတှမွေို့သူမွို့သား ရခိုငျသူ
ရခိုငျသားတိစှာ စုပျစရာမရှိလို့ ဆန်ဒပွနိနျစှာ မဟုတျ၊ မိမိရို့လူမြိုးမပြောကျကှယျရအောငျ ရှိသမြှနညျးလမျးနနျ့ ကာကှယျတားဆီးနိနျကတျစှာရာ ဖွိုကျပါရေ။ ကိုယျဖွိုကျစီခငျြစှာကို ဖွိုကျအောငျလုပျဖို့အတှကျ၊ ကိုယျရို့က မဖွိုကျစီခငျြစှာကို မဖွိုကျအောငျတားဆီးဖို့အတှကျ အငျအားလိုပါရေ။အငျအားဆိုရာမှာ အမြိုးမြိုးဟိပါရေ။ ကညျြဆံ၊ လကျနကျတိပိုငျ အငျးအားလိုပါရေ။ ကညျြဆံတိ၊ လကျနကျတိပိုငျ အငျအားမရှိကေ နိုငျငံရေးအာဏာဆိုရေ အငျအားလိုပါရေ။ ယကေ… ကြှနျတျောရို့မှာ ကညျြဆံမရှိ၊ လကျနကျမရှိ၊ ရခိုငျပွညျနယျအစိုးရ ဆိုစှာလေး အားကိုးမရ၊ ပွညျထောငျစုအစိုးရဆိုစှာလေး ကြှနျတျောရို့ကို အကာအကှယျမပီးလို့ အခုပိုငျ လူအငျအားနနျ့ အသံအငျအားနနျ့ တားဆီးနိနျရစှာ ဖွိုကျပါရေ။
အခုအခါ ၂၀၁၀ တညျးက အရပျသားဝတျစုံနနျ့ သမ်မတဦးသိနျးစိနျအစိုးရ တကျလာပွီး တညျးကပငျ ရခိုငျပွညျနယျထဲမှာ ဆန်ဒပွပှဲတိ အမြားကွီး……၊ ဗမာပွညျထဲမှာလညျး ဆန်ဒပွပှဲတိ အမြားကွီးဖွိုကျခကတျတေ။ ဗမာပွညျမထဲမှာဖွိုကျခရေ ဆန်ဒပွပှဲတိဆိုကေ ရခိုငျပွညျထဲမှာ ဖွိုကျခရေ ဆန်ဒပွပှဲတိထကျ အမြားကွီးပွငျးထနျပါရေ။ အတိုကျအခံ ဆန်ဒပွရလေူတိက အားနဲ့ ဒါးနဲ့ အတိုကျအခံလုပျ ဆန်ဒပွရေ။ ဗမာအစိုးရကလညျး အငျအားသုံးဖွိုခှငျးရေ။ လကျပံတောငျး အရေးအခငျးမှာဆိုကေ ဖုနျးကွီးတိကို မီးလောငျဗုံးနနျ့ပဈတေ။ နံပါတျတုတျတိနနျ့ သတျလို့နှိမျနှငျးရေ။
ယကေလေေ့ ကခငျြပွညျနယျမှာ ဆန်ဒပွပှဲတိတဈခါလမေ့ဖွိုကျကာ။ အလေောကျ ပဋိပက်ခ ပွငျးထနျရေ ကခငျြပွညျနယျမှာ ဆန်ဒပွပှဲတိ မရှိပါ။ ဇာဖွိုကျလို့လဲ။ ဇာဖွိုကျလို့လဲဆိုကေ မိမိရို့နဈနာခကျြကို ဖွရှေငျးရနေိနျရာမှာ ဆန်ဒပွခွငျးနညျးလမျးကို ကခငျြတိမှာ အဓိကထား သုံးစရာ မလိုလို့ဖွိုကျပါရေ။ ဗမာအတိုကျအခံတိမှာ သူပုနျတပျမရှိ၊ ရခိုငျလူမြိုးတိမှာလေး ရခိုငျပွညျထဲမှာ သူပုနျတပျမရှိ။ ကိုယျ့နဈနာခကျြကို ပွောရအေခါ၊ အမြိုးသား အန်တရာယျတိကို ကာကှယျတားဆီးရနေိနျရာမှာ၊ ကွားကဖွရှေငျးရေး ကိရိယာအနိနျနနျ့ တပျမရှိ။ လကျ နကျကိုငျတပျမရှိကေ ရှိစှာလကျနကျသုံးရရေ။ လမျးကိုထှကျပွီးကေ လူအငျအားနနျ့ အသံကယျြအောငျအျောရပါရေ။ အေး… ပွောလိုကျမေ။ ဆန်ဒပွခငျြလား……။ ဆန်ဒမပွခငျြကေ တပျရှိအောငျလုပျ။ ဆန်ဒလေးမပွခငျြ … တပျလေး မထောငျခငျြကေ… ရခိုငျပွညျနယျအစိုးရကို ကိုယျ့အစိုးရဖွိုကျအောငျလုပျပါ။ အာဏာရ အောငျလုပျပါ။
နိုငျငံတကာဆကျဆံရာ ဘာသာရပျမှာ စကားတဈခှနျးရှိပါရေ။ “စကားကို ခြိုခြိုသာသာပွောပါ။
ယကလေေ့ တုတျကွီးကွီးတဈခြောငျးတော့ ဆောငျထားပါ။” စကားကိုခြိုခြိုသာသာပွောပါ။ တုတျအကွီးတဈခြောငျးကိုငျထားပါလတျ။ ယကေေ ပွောလိုကျပါမေ။ စကားကို ထိရောကျမှုရှိအောငျ ရကျပွတျ ရကျပွတျအျောနိနျရရေ ရချိုငျပွညျသူပွညျသားတိ…၊ စကားကို အျောမပွောခငျြလား၊ စကားကို တတိုးခြေ၊ ခခြိုသသာနနျ့ ထိထိရောကျရောကျဖွိုကျအောငျ ပွောခငျြရဆေိုကေ တုတျကွီးကွီးတဈခြောငျးတော့ ဆောငျထားပါ။ တညျ့တညျ့ပွောရဖို့ ဆိုကေ… တပျရှိရဖို့။ ရှိရတေပျလသေ့ော ရခိုငျပွညျထဲမှာ သနတျပေါကျရပါဖို့။ ကြှနျတျော ကတော့ခါ တပျထောငျရလေိုငျးကလူမဟုတျ။ တရားဝငျမွပေျေါက အာဏာ တညျဆောကျ တလေိုငျးထဲက လူတဈယောကျဖွိုကျပါရေ။ သုံးသပျပွစှာပါ။ ကြှနျတေျာ့ကို ဖမျးခငျြကလေေ့ နှဈပါတီပေါငျးပွီး ခါမှ နောကျတဈခေါကျဖမျးလို့ထောငျခပြါ။
သနျးခေါငျစာရငျးဥပဒမှော ပုဒျမ-၁၂ ရို့ ပုဒျမ-၁၆ ရို့မှာ ပွောထားပါရေ။ အခကျြအလကျကို မှနျမှနျကနျကနျဖွညျ့သှငျးရဖို့ဆိုပွီးကေ ပွဌာနျးထားပါရေ။ ပုဒျမ-၁၉ မှာတော့ ဇာပိုငျဆိုလေး ဆိုကယေငျးပိုငျမှနျမှနျကနျကနျ ရီးဖွညျ့မသှငျးကေ ထောငျဒဏျ တဈလ၊ ငှဒေဏျငါးသောငျး ခမြှတျနိုငျရလေို့ဆိုပါရေ။ ယငျးပိုငျ ဥပဒမှော ပွဌာနျးထားရေ အတိုငျးနာမညျလိမျ လူမြိုးလိမျကို မဖွညျ့သှငျးဖို့နနျ့ ရိုဟငျဂြာဆိုရလေူမြိုးလိမျနာမညျကို ဖွညျ့ကအေရေးယူဖို့ထုတျပွနျ ကွငွော ကေ ရပါရေ။ ယငျးပိုငျမကွငွောဘဲနနျ့ လူ့အခှငျ့အရေးအရ ခိုးဝငျဘင်ျဂလီဖွိုကျဖွိုကျ အသူ ဖွိုကျဖွိုကျ ကွိုကျတေ လူမြိုးနာမညျကို ရှီးနိုငျရလေို့ခှငျ့ပွုထားစှာကိုကွညျ့ကေ… ဗမာအစိုးရ၊ ဗဟိုအစိုးရ၊ ပွညျထောငျစုအစိုးရဆိုစှာ ကိုယျ့အစိုးရမဟုတျလို့ အားကိုးမရဆိုစှာ ပျေါလှငျ နိနျပါရေ။ အခု ရခိုငျတိနနျ့ ထိပျတိုကျတိုးခိုငျးပွီးကေ ရခိုငျတိကို လူမိုကျလုပျခိုငျးပွီးကေ အသုံးခရြဆေိုစှာမြိုး သုံးသပျလို့ရနိုငျပါရေ အခွအေနတေခြို့ကို အခုရှုမွငျသုံးသပျရပါရေ။
ပွီခရေ AZG နှငျထုတျဆန်ဒပွပှဲမှာ လှနျခရေ ၂-ပတျလကျေက ဒဝေင်ျကဘာကှငျးမှာ ကြှနျတျောပွောခရေ။ အခုရခိုငျပွညျကို ရချိုငျပွညျနယျလို့ချေါရအေကွောငျး၊ ယငျးရခိုငျ ပွညျနယျဆိုစှာမှာ ရခိုငျပွညျနယျအစိုးရဆိုစှာနနျ့ ရခိုငျပွညျနယျလှတျတျောဆိုစှာရှိရေ။ ယငျးရခိုငျပွညျနယျအစိုးရနဲ့ ရခိုငျပွညျနယျလှတျတျောမှာ တဈခုလလေု့ပျပိုငျခှငျ့အာဏာ တဈခုလမေ့ရှိလို့ ပွောခပါရေ။ ရခိုငျပွညျနယျမှာ အရေးကွီးဆုံးပွဿနာသုံးရပျဖွဈတေ-(၁) ဘင်ျဂလီကုလားပွဿနာ (၂) သယံဇာတပွဿနာ (၃) စဈတပျက မွသေိမျးထားစှာတိ ပွနျရရှိရေးပွဿနာတိကို တဈခုလေးမလုပျပီးနိုငျရလေုပျပိုငျခှငျ့မဲ့အာဏာမဲ့ ပွညျနယျအစိုးရနနျ့ ပွညျနယျလှတျတျောဖွိုကျတဆေိုရေ အကွောငျးကို ပွောခပါရေ။ အခုထပျပွောလိုကျပါမေ။ အခုရခိုငျပွညျနယျအစိုးရ၊ ရခိုငျပွညျနယျလှတျတျောဆိုစှာအယငျလှနျခရေ နှဈပေါငျး သုံးဆယျ လောကျက ရခိုငျပွညျနယျကောငျစီလောကျတောငျ အသုံးမကြ၊ အာဏာမရှိလို့ ကြှနျတျော ထပျတိုးလို့ အခုပွောပါရေ။ နာမကေရာ အကွီးမသနျ၊ နာမကေရာ အစိုးရလတျ၊ လုပျပိုငျခှငျ့ တဈခုလမေ့ရှိ၊ ကောငျစီလောကျတောငျ အသုံးမကြ၊ အားလုံးအခှံ၊ ပွညျနယျဆိုစှာလေးအခှံ၊ ပွညျနယျအစိုးရဆိုစှာလေးအခှံ၊ ပွညျနယျလှတျတျောဆိုစှာလေးအခှံ၊ အားလုံးအခှံ။
ယကလေသေ့ော တခကျြပွောရဖို့ဆိုကေ ယငျးအခှံတိလေး အရေးကွီးပါရေ။ ယငျးအခှံတိကို ဗမာအစိုးရ ပွနျယူလို့မရအောငျ ကြှနျတျောရို့ သိမျးထားပွီးကေ ယငျးအခှံတိထဲမှာ အသားကို တဖွညျးဖွညျးခငျြးဖွညျ့ယူလားလို့ရပါဖို့။ ဇာအသားတိကို ဖွညျ့ယူလားရဖို့ဆိုကေ – – –
© ရခိုငျပွညျနယျ ဝနျကွီးခြုပျကို ပွညျထောငျစုသမ်မတက မခနျ့ဘဲ ပွညျနယျလှတျတျောက တိုကျရိုကျခနျ့ နိုငျအောငျလုပျရဖို့-
© ပွညျနယျလှတျတျောလုံးဝ အပိုငျစီးထားနိုငျသော လှတျတျောအမတျ အရအေတှကျ ရအောငျလုပျရပါဖို့
© မွို့နယျအုပျခြုပျရေးမှူးတိကျို ဗဟိုကခနျ့စှာ မဟုတျဘဲ မွို့တျောဝနျအဖွိုကျ၊ မွို့နယျအုပျခြုပျရေးမှူးတိက ရှေးကောကျတငျမွှောကျနျိုငျရေ စနဈဖွိုကျ လာအောငျဖှဲ့စညျးပုံကိုပွငျရပါဖို့ –
© ပွညျနယျလှတျတျောနနျ့ ပွညျနယျအစိုးရ၏ လုပျပိုငျခှငျ့ ဇယားတိကို တိုးခြဲ့ရအောငျလုပျရပါဖို့ –
© ရခိုငျပွညျနယျထဲက ရှဂေတျအပါအဝငျ သဘာဝ သယံဇာတတိ၏ ဝငျငှအေမြားစုကို ရခိုငျပွညျနယျသားတိခံစာခှငျ့ရအောငျ ဖှဲ့စညျးပုံကို ပွငျရပါဖို့။ – –
-ယငျးပျိုငျအသားတိအနှဈတိကို ဒပေိုငျအခှံသကျသကျဖွဈနိနျိစှာ နိနျရာတိထဲမှာ ဖွညျ့လားနိုငျကေ သနေတျမဖောကျဘဲနနျ့ နညျးနညျးခငျြး နညျးနညျးခငျြး ကိုယျ့ရပိုငျခှငျ့တိကို ရနိုငျအောငျ ကွိုးစားလားဖို့ဆိုစှာလေး မဟာဗြူဟာနညျးလမျးတဈရပျ ဖွိုကျပါရေ။
ကြှနျတျောရို့က ဒပေိုငျသနေတျမဖောကျဘဲ လုပျနိုငျဖို့နညျးလမျးတိကို အိမျမကျမကျနိနျရေ အခြိနျမှာ ကုလားတိကတော့ခါ နရောတိုငျးအခြိနျတိုငျးမှာ သနေတျမဖောကျဘဲ ရခိုငျပွညျကို သိမျးရနေညျးလမျးတိနနျ့ ရခိုငျပွညျကိုတဈစခငျြးတဈစခငျြးသိမျးယူနိနျပါရေ၊ ကုလားတိရေ လူမှီးယငျး၊ မှီးရလေူကို နိုငျငံသားနနျ့အခှငျ့အရီးရအောငျ တဈစခငျြးတဈစခငျြးခိုးကွောငျ ခိုးဝှကျလုပျနိနျကတျပါရေ။
ဒေ ရခိုငျပွညျမှာ သောငျးကနျြးရေ ဒေ ကုလားတိပွဿနာကို မှားယှငျးစှာ ပုံဖျောကတျနအေတှကျနနျ့ ကြှနျတျောရို့ရခိုငျတိဖကျက အမြားကွီးနဈနာစှာတိဟိပါရေ။ ရခိုငျပွညျဘကျမှာ ဖွိုကျတေ ဒပေဋိပက်ခတိစှာ ဗမာပွညျမဘကျမှာ ဖွိုကျတေ မိတ်ထိလာ ဥက်ကံ လားရှိုးရို့ဘကျမှာ ဖွိုကျတေ ပဋိပက်ခတိနနျ့ သဘောသဘာဝခငျြး မတူပါ။ ဗမာပွညျဖကျမှာ ဖွိုကျစှာတိစှာ ဘာသာရေး ပဋိပက်ခကွောငျ့ ဖွိုကျရစှာပါ။ ဘာသာမတူရေ အုပျစုကှဲတိ ပဋိပက်ခဖွိုကျကတျစှာပါ။ ယငျးအတှကျ နနျ့ ယငျးပဋိပက်ခတိကို ဖွရှေငျးဖို့အတှကျ လူ့အဖှဲ့အစညျးနှဈခု ပွနျလညျသငျ့မွတျရေး ငွိမျးခမျြးစှာ အတူယဉျတှဲနထေိုငျရေးကို ယငျးဘကျမှာ ပွောခငျြကပွေောပါ။ ဒဘေကျမှာ လာမပွောပါကေ့။
ဇာဖွိုကျလို့လေးဆိုကေ ဒရေခိုငျပွညျဘကျမှာ ဖွိုကျတေ ပဋိပက်ခတိစှာ ဘာသာရေးပဋိပက်ခမဟုတျ။ ဒကေပွဿနာစှာ လူဝငျမှုကွီးကွပျရေး ပွဿနာ၊ နပျစပျလုံခွုံရေး ကြိုးပေါကျလားရပွေဿနာ ဖွိုကျပါရေ။ ယငျးပိုငျသဘောသဘာဝရှိရေ ပွဿနာဖွိုကျတေ ဆိုစှာကို နိုငျငံတကာမှာ မီဒီယာမှာ ထငျရှားသိသာနိုငျအောငျ ကြှနျတျောရို့ ဘကျက မပွောနိုငျခ။ နိုငျငံတကာ မီဒီယာမှာ ကြှနျတျောရို့ ရှုံးခပါရေ။
ဒပေိုငျ ရခိုငျပွညျမှာ ခိုးဝငျကြူးကြျောဘင်ျဂါလီတိ ဖောငျးပှ သောငျးကနျြးစှာ ပွဿနာကို ဘာသာရေး ပဋိပက်ခပိုငျ ပုံဖျောပွီးကေ နှဈဖကျငွိမျးငွိမျးခမျြးခမျြး နိနျကတျပါ ခဈြခဈြခငျခငျနျိနျကတျပါ လို့ လာလာ ပွောနိနျကတျတေ။
ယငျးပိုငျ ဖွရှေငျးလို့မရပါ။ ဖွရှေငျးရဖို့နညျးလမျးကတော့ခါ ၁၉၈၂-နိုငျငံသားဖွဈခှငျ့ ဥပဒေ နနျ့ စိစဈပွီးကေ ဥပဒအေတိုငျးအရေးယူ ဆောငျရှကျလားရဖို့ ဖွိုကျပါရေ။
ယငျးခငျြ့ကို နိနျ့ရှိ့ ရကျရှိ့ ရှိ့ပွီးကေ၊ ထိုလိုလို ဒလေိုလို လုပျပွီးကေ၊ အရေးယူရဖို့စှာကို အရေးမယူဘဲနဲ့ အခုကမြှ . . . သနျးခေါငျစာရငျးကောကျဖို့စှာရာဝေး . . . နိုငျငံသားဖွဈခှငျ့ တိုငျးရငျးသားဖွဈခှငျ့ နနျ့မဆိုငျဝေး လို့ ပွောနိနျစှာရေ နှဈပေါကျတဈပေါကျရိုကျဖို့ လုပျနိနျစှာလို့ရာ ကြှနျတျောကတော့မွငျပါရေ။
ဒကေုလားပွဿနာစှာ နိုငျငံရေးပွဿနာဖွိုကျပါရေ။ ဘာသာရေး ပဋိပက်ခ မဟုတျ။ ပွညျထောငျစုအစိုးရ ကိုယျတိုငျက နိုငျငံရေးပွဿနာမှနျး သိပါယငျ့နနျ့၊ မတူသော အဖှဲ့အစညျးနှဈခုကွားက ဘာသာရေး၊ လူမြိုးရေးအသှငျဆောငျသော ပဋိပက်ခ ဆိုပွီးကေ အလှဲလှဲအမှားမှား ခေါငျးစဉျတတျထားစှာကိုလေ့ ရခိုငျလူမြိုးတိက လကျခံနိုငျဖို့ မဟုတျပါ။ ဒပွေဿနာရေ နိုငျငံရေးပွဿနာ၊ လူဦးရဖေိအားနနျ့ ဘာသာရေးအကွောငျးပွ၊ လူ့အခှငျ့အရေးမကျြနှာဖုံးစှပျထားပါရေ ကြူးကြျောမှု ပွဿနာရာဖွဈပါရေ။
တာဝနျရှိရေ အစိုးရတိရေ ပွတျပွတျသားသားကိုငျတှယျဖွရှေငျးဖို့ လိုပါရေ၊ ရခိုငျလူမြိုးတိ စိုးရိမျ
သောကကို နားလညျလကျခံရေ ဖွရှေငျးနညျးကရာ ပွညျထောငျစုစိတျဓါတျကို ကိုယျစားပွုရေ လို့ ရခိုငျလူမြိုးတိက အသိအမှတျပွုဖို့ ဖွဈပါရေ။
အသံကောငျးဟဈနိနျရုံ ဒို့တာဝနျအရေးသုံးပါလောကျနနျ့ ပွညျထောငျစုတညျ ဆောကျလို့မရပါ ပွညျထောငျစုလုံခွုံရေးကိုလညျး အာမခံနိုငျဖို့မဟုတျပါ။
သနျးခေါငျစာရငျးမှာ ဘင်ျဂလီနာမညျလိမျ (ရိုဟငျဂြာ)ကို ကုလသမဂဆန်ဒ လူ့အခှငျ့အရေး ဦးစားပီးအမွငျနနျ့ ရှီးသားခှငျ့ပွုစှာ အလှနျအန်တရာယျမြားရေ ပွညျထောငျစုအမြိုးသားလုံခွုံရေး ပွဿနာဖွိုကျပါရေ။
ဖှံ့ဖွိုးရေးဦးစာပီး နိုငျငံခွားရငျးနှီးမွှတျနှံမှု လောဘ၊ နိုငျငံတကာနနျ့ ပွလေညျရေး တဖကျသပျ အမွငျရေ ပွညျထောငျစုအမြိုးသားလုံခွုံရေးကို မကျြကှယျပွုရာရောကျပါလိမျ့မေ
သနျးခေါငျးစာရငျးမှာဘင်ျဂလီနာမညျလိမျ (ရိုဟငျဂြာ) ရေးသှငျးခှငျ့ပွုခွငျးရေ နောကျလာဖို့ ကာလတိ (နှဈပေါငျး ၁၀၊ ၂၀)မှာ ကုလသမဂနနျ့ နိုငျငံတကာပါဝငျ စှကျဖကျမှုကိုပိုလို့ ပိုလို့ လမျးဖှငျ့ပီးရာကပြါလိမျ့မေ။
ရခိုငျလူမြိုးတိက ဒကေိစ်စ (ရိုဟငျဂြာ နာမညျရှီးသှငျးခှငျ့) ကို ပွတျပွတျသားသား ဆနျ့ကငျြကနျ့ ကှကျပါရေ။ အယငျဆုံး ရုတျသိမျးပယျဖကျြပီးဖို့ တောငျးဆိုပါရေ။
နောကျဆုံးအပိတျအနိနျနနျ့ ပွောခငျြစှာကတော့ခါ . . .
ပွညျထောငျစုအစိုးရရေ တိုငျးရငျးသားကိုယျစားပွုအစိုးရ ဖွိုကျပါဇီ။
ရခိုငျပွညျနယျအစိုးရရေ ရခိုငျမြိုးနှယျကိုယျစားပွုအစိုးရ ဖွိုကျပါဇီ။
ရခိုငျပွညျနယျလုံခွုံရေးရေ ပွညျထောငျစုလုံခွုံရေးဖွိုကျတေ လို့ မှတျယူလုပျဆောငျကတျပါလို့လညျး သကျဆိုငျသူတိကို ကြှနျတျော ဒနေိနျရာက ပွောခခငျြပါရေ။
Previous Video |ရခိုငျရိုးရာ အစိုငျအလာ သငျပုနျးကွီးနညျး ( Arakanese Primer )
Next ဆနျမရဘဲ ကညျြဆနျသာရကွသောအခါ ကြှနျုပျတို့ ဘာလုပျကွမညျနညျး